एसपी बाबुछोरासँगै मेयरका भतिजको डीएनए परीक्षण थालियो – आफ्नो समाचार
Afno News — २८ भाद्र २०७५, बिहीबार १८:०१0comment
२८ भदौ, काठमाडौं । निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टको पनि डीएनए परीक्षण थालेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक ल्याबमा विष्टको डीएनए परीक्षण थालिएको हो । अस्पतालका फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती नेतृत्वको टोलीले विष्टको डीएनए परीक्षणका लागि बिहान रगतको स्याम्पल लिएको स्रोतले बतायो । विष्टलार्इ प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरिसकेको छ ।
उनीसँगै विष्टका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुको पनि डीएनए परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको जनाइएको छ । यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गरेको दिलिपसिंह विष्टको डिएसए रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनी छुटेका छन् ।
कक्षा १ मा पढ्दै ७५ बर्षीया हजुर आमा !
सुजिता बनिन् राष्ट्रपति, ओली सभामुख